Mandhera ayaa lagu dilay Macalimiin Kenya u dhashay. – XOGMAAL.COM
Mandhera ayaa lagu dilay Macalimiin Kenya u dhashay.
Baqdin ayaa ka jirta Gobolka Woqooyi oo Al-shabaab ay dhowr jeer ku dileen Macalimiin, Horraantii sanadkaan Afar ka mid ah shaqaalaha Kaawadda ayaa koox la tuhunsanyahay in ay Al-shabaab ka tirsanyihiin waxay ku dileen meel u dhow Magaaladda lafey oo macalimiinta lagu dilay.
Gobolka Woqooyi bari waxaa lagu dilay macalimiin Kenyan ah kadib markii walxo qaraxa lagu tuuray gurigii ay deganaayeen oo ku yaala Magaaladda Lafey.
Laamaha amaanka Kenya ayaa isku dayay in ay soo ay soo qabtaan dadkii ka dambeeyay falkaasi balse waa ay ku guul dareysteen arrinkaasi, Waxese bilaabeen howl gallo ay ku baadi goobayaan dadkii Dambeeyay weerarkaasi.
Masuuliyada weerarkii u dambeeyay Al shabaab ayaa sheegatay.
Wasiirka Difaaca iyo Taliyaha CXD ayaa hor tagaya Gudiyada Amniga iyo Difaaca golaha shacabka